पीसीआर परीक्षण गरेकामध्ये दैनिक २५ प्रतिशतमा कोरोना « Mero LifeStyle
पीसीआर परीक्षण गरेकामध्ये दैनिक २५ प्रतिशतमा कोरोना
मेरो लाइफस्टाइल	|| 21 July, 2021
नेपालमा आज थप २ हजार ८ सय ३८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार १२ हजार ६ सय १६ जनामा परीक्षण गर्दा २ हजार ८ सय ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार ७ सय १५ जनाको पीसीआर र ३ हजार ९ सय १ जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो । आज पुष्टि भएसँगै देशभर संक्रमितको संख्या ७ लाख २४ हजार ४ सय ५५ पुगेको छ भने ६ लाख ३६ हजार ४ सय २ जना पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरी घर फर्किएका मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
पीसीआर परीक्षण गरिएकामध्ये दैनिक २५ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको डा. अधिकारीले बताए । एन्टिजेनबाट परीक्षण गर्दा २१ प्रतिशतमा संक्रमण भइरहेको छ । अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ८ सय ३२ रहेको छ । उनका अनुसार नेपालमा संक्रमणदर १९.२ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्कनेको संख्या १ हजार ४ सय ७५ पुगेको छ । योसँगै ६ लाख ३६ हजार ४ सय २ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । यस्तै आज ३० जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । योसँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ६ सय ३७ पुगेको छ ।
डा. अधिकारीका अनुसार २४ हजार ३ सय ४० जना होम आइसोलेसन, २ हजार ४ सय ९२ जना संस्थागत आइसोलेसन, ६ सय २७ जना सघन उपचार कक्ष र १ सय ७१ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ६९७ जना संक्रमित थपिएका छन् । ललिपुरमा १२८, काठमाडौँमा ४९० र भक्तपुरमा ७९ जना संक्रमित थपिएका हुन् । डा. अधिकारीले अझै पनि धेरै व्यक्ति संक्रमित आशंकामा रहेकाले परीक्षणको दर बढाउनुपर्ने बताए । ‘जति धेरै परीक्षण ग¥यो । त्यति नै मानिसलाई बचाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘ त्यसैले संक्रमितको संख्या पत्ता लगाउन परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ ।’
उनले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने बताए । यद्यपि, खोप लगाउन जाँदा भीडभाड नगर्न र जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाले निधेषाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमणको दर बढेकाले जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले अहिले पनि अस्पतालमा कोभिड–१९ का संक्रमित आउने क्रममा कमी नआएकाले सचेत रहन आग्रह गरेका हुन् । कोभिड–१९ संक्रमण निको भए पनि मासपेशी दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मानसिक समस्या हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेकाले समयमा नै उपचार गर्न समेत सल्लाह दिएका छन् ।